दूध कसरी चिन्नेः नक्कली हो वा सक्कली:: Naya Nepal
यसका आधारमा पनि दूध शरीरका लागि कति महत्वपूर्ण भोजन हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । चाणक्य नीतिले नै अर्को एउटा श्लोकमा दूधमा अन्नमा भन्दा दस गुणा बढी शक्ति हुन्छ भनेको छ ।
आधुनिक विज्ञानले पनि दूधलाई पौष्टिक आहारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । डाक्टरहरू बिरामीलाई दूध खाएर तंगि्रन सल्लाह दिन्छन् । परम्पराले पनि दूध गुनिलो पेय पदार्थ हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको छ । पञ्चामृत बनाउँदा गाईको दूध, दही र घिउका साथमा मह र सख्खर मिसाइन्छ । यस दृष्टिमा दूध अमृत हो ।
यस्ता अनेकौं दृष्टान्तले दूधलाई मानवका लागि सर्वोत्तम आहारका रूपमा परिभाषित गर्ने वा जानकारी दिने प्रयास गरेका छन् । दूध पौष्टिक पदार्थ हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर,
केहीअघि मात्रै आएका समाचारहरू हेर्दा नेपालीहरूले दूध तथा दूधबाट बन्ने अन्य परिकार उपभोग गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ । नेपालका सबैजसो डेरीहरूले अखाद्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । यसबाट नेपालीहरूको स्वास्थ्यमाथि कसरी खेलबाड भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ जुन निकै नै भयावह स्थिति हो ।
स्वास्थ्य राम्रो पार्नका लागि, रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि वा भनौं फाइदा हुन्छ भन्ने सोचेर विश्वासपूर्वक ग्रहण गरिएको चिजमै धोका मिसिएको छ भने आम मानिसले के नै पो गर्न सक्छन् र ? सरकारी तथा जिम्मेवार निकायको कमजोरी वा उदासिनता भनौं वा मानिसमा वृद्धि भएको लोभानीपापानीको प्रवृत्तिले यस्तो किसिमको नहुनुपर्ने कुरा भएको छ । तसर्थ अरू नसके पनि आम उपभोक्ताले आफू सचेत हुन भने अवश्य पनि सक्छन् ।
नक्कली दूधले लाभको सट्टा हानि गर्छ । यसकारण दैनिक उपभोगमा ल्याइने दूध शुद्ध छ कि छैन जाँच्नु आवश्यक छ । जाँच्ने कसरी त ? राम्रोसँग जाँच्न त प्रयोगशालाकै आवश्यक पर्ला तर पनि मोटामोटी रूपमा घरेलु तरिकाबाटै दूध शुद्ध भएनभएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
सुँघेर:सुँघेर पनि दूधको शुद्धता थाहा पाउन सकिन्छ । दूधमा साबुनको जस्तो गन्ध आएको छ भने त्यो सेन्थेटिक दूध हो भन्ने कुरामा थप जाँच गरिरहन आवश्यक छैन ।
चाखेर:थोरै काँचो दूधलाई हत्केलामा लिएर केही बेर रगडी जिब्रोमा लगाउने । यसरी लगाउँदा सक्कली दूध हो भने हलुका मिठास आउँछ ।
हत्केलामा रगडेर:नक्कली दूध हत्केलामा रगड्दा अलिअलि चिप्लोपन महसुस हुन्छ । दूध सक्कली छ भने त्यस्तो किसिमको चिप्लोपन थाहा हुँदैन ।
रंग हेरेर: सक्कली दूध उमाल्दा त्यसको रंग परिवर्तन हुँदैन तर नक्कली दूध हलुका पहेँलो बन्दछ । नउमालिकन त्यत्तिकै राख्दा पनि नक्कली दूधको रंगमा केही परिवर्तन देखा पर्छ ।
फिँजअनुसार:कतिपय अवस्थामा लुगा धुने सर्फबाट पनि नक्कली दूध बनाएका हुनसक्छन् । एउटा सिसाको पारदर्शी सिसीमा अलिकति दूध राखेर केही बेर हल्लाउँदा त्यसमा धेरै नै फिँज देखियो र त्यो निकै बेरसम्म रहिरह्यो भने पनि उक्त दूध नक्कली हो र त्यसमा वासिङ पाउडर मिसाइएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
डार्क सर्कल तथा आई ब्याग्सले हाम्री अनुहार सौन्दर्य नै बिगार्छ। पक्कै पनि कसैलाई आँखा वरिपरि कालो सर्कल मनपर्दैन। कतिपय समय पर्याप्त निन्द्रा पछि पनि डार्क सर्कलको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिदैन। डार्क सर्कल कम निन्द्राको कर्णले मात्र नभएर तनाव र कामको बोझले पनि हुन्छ।यस्ता डार्क सर्कलबाट मुक्त हुन घरेलु उपचारहरू उत्तम हुन्छ। घरेलु विधिको सहायताले आँखा वरिपरि परेका सर्कल सजिलै हटाउन सकिन्छ।
जतिसक्दो चाँडो डार्क सर्कल हटाउनको लागि आइस वा कोल्ड प्याक प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। यसो गर्दा यसले डार्क सर्कल हट्नुका साथै रक्त प्रवाह पनि बढ्छ। रगत प्रवाह बढ्नाले अनुहार फ्रेश र चमकदार देखिन्छ।
डार्क सर्कल हटाउनको लागि आलु पनि निकै मद्दतगार हुन्छ। आलुमा भरपूर मात्रामा विटामिन पाइन्छ जसले कोलेजेन बढाउँछ। आलुको रस निकाल्नुहोस् र त्यो रसमा कपास भिजाएर आँखाको वरिपरि लगाउनुहोस्। यसलाई १० मिनेटको यत्तिकै छोड्नुहोस्। यसो गर्नाले छिटै डार्क सर्कल कम हुन्छ।
आई मसाज गर्नाले पनि डार्क सर्कल कम हुन्छ। आई मसाज गर्नाले रक्त प्रवाह बढ्छ जसको कारणले छालामा चमक र ताजगी आउँछ।
गोलो गोलो परेर काँक्रोको टुक्रा काट्नुहोस् र यसलाई आँखामा राख्नुहोस्। यसलाई १० मिनेटसम्म आँखामा राख्नुहोस्। त्यसपछि सफा पानीले आँखा धुनुहोस्। केहि दिनमै तपाईंको आँखाको डार्क सर्कल हट्छ।
गुलाब जल प्राय: छाला ताजा राख्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। गुलाब जलले डार्क सर्कल कम गर्न पनि धेरै मद्दत गर्दछ। सानो कपासको टुक्रा लिनुहोस्। अब त्यो कपास गुलाब जलमा भिजाएर आँखामा लगाउनुहोस्। १५ मिनेटको लागि त्यत्तिकै छाड्नुहोस् र १५ मिनेटपछि सफा पानीले मुख पखाल्नुहोस्। दैनिक रूपमा १ महिनासम्म यसो गर्दा आँखा वरिपरिको डार्क सार्कल हराएर जान्छ।